नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : दुनियाँ लाई बेकुफ बनाउँदैछन छबिलाल ! छबिलाल बाँच्दा सम्म नेपाल बाँच्न गार्हो छ, भेंटिलेटरबाट पछी नेपाल ब्युँतिन्छ ब्युन्तिन्न भन्न कठिन छ । त्यस्तै देखिँदैछ नेपालको राजनीतिक गोरेटो !
दुनियाँ लाई बेकुफ बनाउँदैछन छबिलाल ! छबिलाल बाँच्दा सम्म नेपाल बाँच्न गार्हो छ, भेंटिलेटरबाट पछी नेपाल ब्युँतिन्छ ब्युन्तिन्न भन्न कठिन छ । त्यस्तै देखिँदैछ नेपालको राजनीतिक गोरेटो !
उता गयो भुरे भारेलाई बेकुफ बनायो यसरी हेर्नुस् फोटो :
दुनियाँ लाई बेकुफ बनाउँदै छन छबिलाल ! केपी ओली देखी शुशील कोइराला सम्म, मधेशी देखी जाती जनजाती सम्म, नेत्र बिक्रम देखी बैद्य सम्म सबै छबिलालले बनाएको "कुहिरोको काग" मात्र !!! तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस् नेपाल अहिले पनि छबिलालको आतंकमै सिमित छ । संबिधान बन्ने नबन्ने कहिले बन्ने यो पनि उनकै हातमा छ । अरु सबै गले कर्कलो गलेझै ! बर्तमान पुस्ता ले नेपाल राम्रो भएको देख्न नपाई मर्नु पर्ने हो कि ??
यता आयो काङ्रेस एमालेलाई बेकुफ बनायो यसरी ! केपीको अडानले पनि हावा खाला जस्तो पो देखिन थाल्यो !